Nanomboka ny famokarana fitaovana hose hydraulika, adaptatera ary fivorian'ny hose hydraulic tamin'ny 2007, Ny vokatra sy ny vokatra lehibe indrindra dia natao ho an'ny fitaovana hydraulika avo lenta sy fivorian'ny hose.
Taorian'ny 14 taona nivoatra, HAINAR Hydraulics nahazo laza tsara amin'ny mpanjifa an-trano sy any ivelany mpanjifa. Izahay dia mamatsy ny fivorian'ny hose hydraulika avo lenta sy ny fitaovana ho an'ny orinasa milina amin'ny tsena anatiny. Toy ny milina fanindronana tsindrona, milina fanorenana, milina fitrandrahana ary milina fandavahana Fitaovana fanjonoana ho an'ny sambo sns. Ankehitriny dia manana 40% ny fittings hose hydraulic, adapters ary hydraulic fast couplings dia aondrana any Eoropa Andrefana, Eoropa Atsinanana, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo. ary Azia Atsimo Atsinanana.
Ny HAINAR Hydraulics dia manatsara sy manatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra. Mihaona sy mihoatra ny fangatahan'ny mpanjifa maneran-tany.
Hydraulika HAINAR miaraka amin'ny foto-kevitra tsotra hoe "Quality First, Customer First". Omeo ny mpanjifanay vidiny mirary kokoa, kalitao ambony ary fotoana fandefasana haingana.
Ny kalitaon'ny vokatra miavaka miaraka amin'ny kofehy vita amin'ny milina CNC, laharan'ny ampahany misy ranomainty laser, ary kaody fitaka ho an'ny traceability.
Ny sakany sy ny halalin'ny famoriam-bola tsy manam-paharoa - ny fampiasam-bola mitohy amin'ny famoriam-bola dia manome antoka fa hanana ny ampahany ilainao amin'ny tahiry izahay ary vonona halefa anio.
Manome ny haavon'ny serivisy avo indrindra sy ny fanohanana ara-teknika mba hahazoana antoka fa ny mpanjifantsika dia mahazo ny ampahany mety, amin'ny fotoana mety, amin'ny fotoana rehetra. Ny commande rehetra dia voaray alohan'ny 3 ora tolakandro ny sambo afovoany io andro io ihany.
Ny fahaiza-machining an-trano sy ny welding mba hamorona kojakoja mahazatra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Fitsapana fipoahana hose an-trano hatramin'ny 24,000 psi sy famolavolana / fanamboarana hose mahazatra araka ny fepetra takianao.
Hanohana ny toe-tsain'ny orinasan'ny mpanjifa aloha isika, kalitao voalohany ary miorina amin'ny fahamendrehana, ary hanokana hatrany ny fampandrosoana ny fanodinana fitaratra lalina sy ny famokarana faobe. Izahay dia manome ny mpanjifanay vokatra avo lenta indrindra sy serivisy mahomby indrindra miaraka amin'ny teknolojia matihanina sy ny vidiny mety. Koa Tongasoa eto an-toerana sy vahiny mpanjifa mba hiara-miasa aminay amin-kitsimpo.